ụgbọ okporo ígwè Archives | Peeji 3 nke 5 | Save A Train
Oge Ọgụgụ: 7 nkeji Jewish Mardi Gras onye ọ bụla? Tinye ejị Purim! usọrọ Purim na nke 14 na 15 ụbọchị nke Ada, nke iri na abụọ, n'ọnwa nke kalenda ndị Juu nke na-ekwekọ n'àgwà March. Purim nwere a ngagharingosi ka ikuku, na ndị mmadụ na-eyi uwe kachasị mma nke Sabbathbọchị Izu Ike ma ọ bụ uwe mara mma…
Oge Ọgụgụ: 7 nkeji Ihe ka nwere ike ịbụ otu obere chilly gburugburu a, ma Nice ejị bụ n'aka ọkụ gị elu! The French Riviera na-emepụta ihe omume pụrụ iche ebe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu nde ndị ọbịa si n'akụkụ ụwa niile na-enuga na Nice. Nice ejị bụ otu n'ime ihe ndị kasị…
Oge Ọgụgụ: 3 nkeji Ọ bụ eziokwu na e nwere ihe karịrị otu ụzọ iru Amsterdam si Paris. Ma mgbe ha na ihe niile abịa na ha pro na ọghọm, njem site na Paris na Amsterdam ụgbọ okporo ígwè na-anọgide na ndị kasị mma nhọrọ mgbe ị na-eme na-atụnyere. Anyị na-enye gị ihe kpatara ya…
Oge Ọgụgụ: 7 nkeji Mgbe ị na-eme atụmatụ a njem Europe, ị na-eche ihu na ọtụtụ nhọrọ! Ebighebi ebe na ahụmahụ, na ị nwere ike ịga njem ruo ọtụtụ afọ ma ka na-eche na ị tufuru ihe dị mkpa. Nke a nwere ike iduga ịmehie njem nke imebiga ihe ókè, na ịhapụ ihe…
Oge Ọgụgụ: 3 nkeji Ejegharị ejegharị na-Europe na-a tụsiri maka ọtụtụ. Na ọ bụrụ na ị na-na na dabara nwere ohere nne Mmetụta a ebe anya gị ịwụ ndepụta na-ahụ niile kasị mma ebe na Europe, ị ga-achọ ime ka ahụmịhe a na-echefu echefu dịka…
Oge Ọgụgụ: 5 nkeji The whooshing ụda nke a ụgbọ okporo ígwè na-eru n'ime a ojii, na-ekwe omume nke na-na na na-aga ebe kpamkpam na-atụghị anya. Nwere ike ị na-eche ihe ọ bụla mma karịa Famous na Historical Train ụzọ gasị? Ụgbọ oloko na-a na-echetara nke Golden Age nke njem. Mgbe ndị mmadụ…
Oge Ọgụgụ: 4 nkeji Ụgbọ oloko na-ụzọ kasị mma njem na Italy n'agbanyeghị nke oge. Otú ọ dị, ha-abụ odi mfe na ihe ọma nhọrọ, karịsịa n'oge oyi. Winter ụgbọ okporo ígwè eme njem na Italy bụghị naanị mma, ma ọ bụ na-ngwa ngwa na oru oma. Edemede a…
Oge Ọgụgụ: 5 nkeji 2018 fọrọ nke nta na njedebe, nke pụrụ nanị ịpụta na Christmas bụ nso! Ndị mmadụ na-ka na-anaghị ejikere maka ya, ma n'ihi na ndị njem, ọ bụ nnukwu oge na-eme atụmatụ a njem. Ọ bụrụ na ị na-achọ nri obodo-eji Christmas na, anyị ga…